शिल्पाको लागि मध्यरातमा छविले लेखे यस्तो स्टाटस ! « Sajilokhabar
काठमाडौँ, ३१ असार । नायिका शिल्पा पोखरेलले निर्माता (श्रीमान) छविराज ओझासँग सम्बन्ध विच्छेदको माग गरेकी छिन् । श्रीमान ओझासँग पारपाचुकेको माग गर्दै शिल्पाले यही आइतबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकी हुन् ।
श्रीमानबाट आफु माथि हिंसा भएको शिल्पाले आरोप लगाउँदै आइरहेकी छिन् । छवि र शिल्पा दुवै जना मिडियामा आएका छन् । शिल्पाले मिडियामा आएर छबी माथि आरोप लगाउदै आएकी छिन भने छबी श्रीमतिलाई घर फर्काउने कोशिसमा देखिन्छन् ।
सोमबार मात्रै श्रीमानसँग शिल्पाले सम्बन्ध विच्छेद माग गरेका खबर सार्वजनिक भएको हो । यो खबर सार्वजनिक भएसँगै निर्माता ओझाले सोमबार राती फेसबुक मार्फत शिल्पालाई सम्बोधन गर्दै खुला पत्र लेखेका छन् । यस्तो छ छविले लेखेको स्टाटस:
अनुष्काको हट तस्वीर देखेपछि विराटको यस्तो रियाक्सन
एजेन्सी, २ भदौ । बलिउड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा र विराट कोहली चर्चामा रहिरहन्छन् । उनी
ट्रेन्डिङ नम्बर १ मा अनमोलको ‘कृ’
काठमाडौं, २ भदौ । युवा स्टार अनमोल केसी स्टारर फिल्म ‘कृ’ युट्युबमा रिलिज भएको २४
चर्चित अभिनेता कोमललाई कारबाट तानेर कुटेपछि….
एजेन्सी, २ भदौ । कन्नड फिल्म अभिनेता कोमलमाथि बेंगलुरुमा कुटपिट भएको छ । वास्तवमा कोमल
‘कृ’ लाई एक दिनमै १८ लाख भ्युज
काठमाडौँ, १ भदौ । युवा स्टार अनमोल केसी स्टारर फिल्म ‘कृ’ युटुवमा अपलोड भएको छ